के इस्लामपछि नाम परिवर्तन गर्नु पर्छ? – Islam Guide
इस्लामपछि नाम परिवर्तन गर्नु जरुरी छैन। पुरानो नामलाई निरन्तरता दिनु नै उचित हो, ’cause सहाबाहरुको युगमा नाम परिवर्तन गर्न चलन थिएन। धेरैजसो मानिसहरु इस्लामपछि आफ्नो गैर-अरबी नाम नै बाँकी राखे। तर नामले गलत अर्थ बोकेको छ भने परिवर्तन गर्नु पर्छ।
यी अवस्थाहरुमा नाम परिवर्तन गर्नु पर्छ-
१) यदि नामले ईमान विपरित कुराहरु वा अल्लाह बाहेक अरु कसैको उपासना गरिरहेको कुरा छर्लङ्ग हुन्छ भने परिवर्तन गर्नु पर्छ,
जस्तै… अब्दुल-मसीह (इशुको भक्त) अब्दुन्नबी (नबीको भक्त) वा गलत अर्थ बोकेको छ, जस्तै… विष्णु, राम, शंकर आदि।
वा अल्लाहको खास नाम वा गुणको संज्ञा दिएको छ,
जस्तै– सम्पूर्ण मालिकहरुका मालिक, दाताहरुका दाता, राजाहरूका राजा आदि।
२) गलत अर्थ ओगटेका नामहरु, जसले गर्दा अरुले घृणा गर्छ ।
अल्लाहले खानपिन तथा जीवनको सम्पूर्ण पक्षमा घृणात्मक कुराहरुलाई अवैध गर्नु भएको छ। त्यसैले गलत अर्थ ओगटेका नामहरु राख्नु हुँदैन। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “ईमानपछि सीमा उल्लंघनकारीमा नाम कमाउनु निकृष्ट नाम हो।” (श्रोत- सूरह अल्-हुजरात : ४९/११)
३) गैर-मुस्लिमहरुको कुनै धार्मिक पहिचान वा प्रतीकको रुपमा प्रसिद्ध नाम छ भने परिवर्तन गर्नु पर्छ,
जस्तै… पिटर्स, युहन्ना, पुलिस, दुर्गा, विष्णु, शंकर, पार्बती, शिव आदि।
उपर्युक्त अवस्थामा सन्देहपूर्ण नामहरुलाई राम्रो र सुन्दर नामले परिवर्तन गर्नु पर्छ, ’cause मुस्लिमले जीवनको कुनै पनि अवस्थामा काफिरको अनुसरण गर्नु हुँदैन।
नाम परिवर्तन गर्नु उत्तम हो-
अल्लाहले मन पराउने नामहरु, जस्तै… अब्दुल्लाह र अब्दुर्रहमान आदि। अल्लाहले यी नामहरुलाई धेरै मन पराउनु हुन्छ, तर इस्लाममा प्रवेशसित यसको कुनै सम्बन्ध छैन।
स्मरण रहोस् ! बिना कारण पनि नाम परिवर्तन गर्न सकिन्छ, जस्तै… राम्रो अर्थ बोकेको अरबी नाम राख्नु।
के नामको अर्थ इस्लाम र आस्था विपरित छ ?
हो- => यसलाई अनिवार्य रुपमा परिवर्तन गर्नु पर्छ।
होइन- => के गैर-मुस्लिमहरुको कुनै धार्मिक पहिचान वा प्रतीकको रुपमा प्रसिद्ध नाम छ ?
हो- => शंका निवारण र उनीहरुको समान हुनबाट जोगिनको लागि परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ।
होइन- => गलत अर्थ भएको नाम त होइन, जसले गर्दा अरुले घृणा गर्छ ?
हो- => राम्रो अर्थ लाग्ने सुन्दर इस्लामि नाम राख्नु मुस्तहब हो।
होइन- => होइन- यदि पुरानो नामले कुनै गलत अर्थ प्रकट हुँदैन भने त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्दैन, ’cause सहाबाहरुको युगमा नाम परिवर्तन गर्ने चलन थिएन। धेरैजसो मानिसहरु इस्लामपछि आफ्नो गैर-अरबी नाममा नै बाँकी रहे। बिना कारण पनि नाम परिवर्तन गर्न सकिन्छ, जस्तै… अब्दुल्लाह र अब्दुर्रहमान, राम्रो अर्थ बोकेको अरबी नाम राख्नु।